म अनी मेरा पल हरु!: नयाँ बर्षको शुभकामना !!!
मेरा सम्पुर्ण शुभचिन्तक एवं शाहित्यकार मित्रहरु गणेश खड्का आयरलैण्ड, एल बी प्रधान कोरिया,जय छाङ्छा नयाँ दिल्ली भारत, अर्जुन दुङमेन राई ईराक, इन्द्र सुनुवार ईमिरेट्स, समादर्सी काईंला ईमिरेट्स, गोपाल राई ईङ्गलैण्ड, कबिराज राई नेपाल, छक्कु उदाशी जापान, बसन्त गौतम जापान, अनुज कुलुङ पोखरा नेपाल, मिना बान्तवा इजरायल, गीता थापा ईजरायल, मनु लोहरुङ ईजरायल, शशी थापा सुब्बा हङ्कङ, लोजर घिसिङ नेपाल,मनु ठाडा मगर ईङ्गलैण्ड,कैलाश राई नेपाल, दुम्माली दाई चन्द्र नेपाल,सुजन शर्मा, सुर्य प्रसाद न्यौपाने साउदी, खगेन्द्र खिलाफी कतार, संगम बान्तवा साउदी, इन्द्र पुन साउदी, चकेन्द्र राई कैदी कतार, रकम धोज राई कतार, दिलिप योञ्जन टेक्सास अमेरिका,योगेन्द्र भाई मलेशिया, दीपेन्द्र कुमार झा जापान, एकल यात्री ज्यु, दुर्जेय चेतना, अशेस, फेसबूकमा हुनुहुने मित्रहरु, खगेन्द्र पन्धाक, सीमा आभस, शान्ता झाक्री, आशंक उपाध्यय,आशा गुरुङ,बिक्रम सुब्बा, शुशिला लामा, लगायत सम्पूर्ण मेरो चिरपरिचित इष्ट मित्रहरु तपाईहरुमा यो नयाँ बर्षले नयाँ-नयाँ जोस अनि जाँगर प्रदान गरोस, तिता बिगतलाई २००९ले सोहोरेर लैजाओस अनि नयाँ नयाँ प्रगतीको पालुवा पलाओस यही छ २०१०को तपाईंहरुमा हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
तपाईँ र यो ब्लगका सम्पूर्ण पाठकहरुलाई नयाँ वर्ष २०१० को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
सुजन जी, देपेन्द्र जी, एकल यात्री जी तपाईंहरुमा पनि सोही कामना गर्दै प्रगतीको कामना गर्दछु, तपाईंहरुको हरेक पाइलामा खुशी झुलोस यही कामना छ २०१० को धन्यवाद।
एकल यात्री जी, हजुरको बिचार मा म सोह्रै आना सहमत जनाए, जुन लेखाइ छ तपाईंको त्यो सही हो, तरै पनि हामी यो सईन पल्टेको घाउलाई २०१०ले केही निको पार्ला भन्ने आशा र विश्वास गरौ है त।
जय छाङ्छा said...
Jaya B Rai Chhangchha
Mobile: 09871 966 045
B. J. bro यहाँको पनि आउदो वर्ष शुखद रहोस, मनले सोछेको नै बनाउनुभएको योजनाहरु सफल रहोस्, यो लुजरको तर्फबाट यहाँलाई नयाँ वर्ष २०१० को हार्दिक शुभकामना!
Gopal k Rai said...
तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हो, २००९ मा मेरो जीवनमा धेरै जसो त तिता अनुभवहरुले नै घरजम गरेका छन् । आशावादि छु २०१० ले सोहोरेर नयाँ नयाँ.......! तपाईको Wish को लागि धन्यवाद !!!!
Sashi Thapa Subba said...
tapaika sampurna mitraharulai ra tapai lagayat tapaiko pariwarlai pani 2010 ko hardik mangalmaya shubhakamana mero tarfa bata pani.